Ungakhula njani kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 262
Ukukhula kwiTwich Kubalulekile ukuba ucace malunga neenjongo zendlela yokwandisa ukubonakala kwakho ukuze ube noluntu ngakumbi kwisitishi sakho. Kufuneka wenze iindlela ezininzi, Yazi eyona nto bayithandayo abalandeli bakho, ukuba usasazo lwakho ngqo lubasemgangathweni, kwaye yintoni ekhoyo kwi ukuthulisa isimumu ukuze ube nakho ukuphumeza eli jelo lakho liphumelele kwaye uzibona uxhamla kwezoqoqosho Ngokubini.
Iinjongo eziza kukunceda ukhule kwi-Twich
Kuya kufuneka uphumeze imirhumo neminikelo.
Vumela abaphulaphuli bakulandele.
Yenza kwaye ucwangcise umxholo esemgangathweni.
Yenza ulungelelwaniso kusasazo lwakho.
Bayazi i-streamig yakho kwiinethiwekhi zakho.
Ibhonasi kwaye uvuze abasebenzisi bakho.
Los Izimvo kwingxoxo yakho zibaluleke kakhulu.
Mabatyelele ijelo lakho okokuqala.
Khangela iingcebiso okanye iingcebiso ngendlela yokukhula kwiTwich.
Kuya kufuneka ubenayo izixhobo zemultimedia ngenkxaso yeqonga elungileyo Ngokubini.
Yenze njalo buya kwijelo lakho le-twich.
Fumana ababhalisile bakho ukuba babukele usasazo lwakho ngqo ngaphezulu kwemizuzu emi-3.
Ungalonyusa njani ixesha lokujonga kwiTwitch?
ukuba ukwandisa ixesha lokujonga kwiTwich, into ekufuneka uyenzile yile abathathi-nxaxheba bakho baqhubeka nokubukela usasazo lwakho ngokulandelelana kwaye bonwabele umxholo abawuthandayo kwaye bayijonga ngokonwaba kwisitishi sakho. Oku kuya kukunika ngokuzenzekelayo iziphumo ngenani lamanqaku ongezelelweyo.
Wazi njani ukuba ngubani okujongileyo kwiTwitch?
Ukuqinisekisa ukuba ngoobani ubukele kwiTwich Kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Jonga icandelo lengxoxo elibonisa amanani amabini.
Eli candelo liza kuqaphela ukuba ngubani odibene nengxoxo.
Uya kubona igama labasebenzisi.
Uya kubona iindidi ezinje: "Iimodareyitha", "Abasebenzi" kunye ne-OBS.
Unokuba notyelelo olungakumbi ukuze ukhule njani kwiTwitch?
Enye yeendlela iyakwandisa iTwich yakho, Ingaba lonto yi abahlobo bakho kunye nabanye bakunceda ukuba wabelane ngeewebhusayithi zakho zentlalo.
Yenza ifayile ye- uyilo oluhle kakhulu
Khangela enye ukhetho olufanelekileyo lwemidlalo yokusasaza.
Umxholo wakho wokuqala.
Ukuba awunayo I-YouTube ivule ukuze ulayishe iividiyo zakho.
Zama ukusasaza isasazo kwakhona kangangoko unakho.
Uqine kwezinye iindawo.
Indlela yokukhulisa abantu kum Stream Twich?
Amanyathelo amane anokukunceda:
Yenza umxholo wakho womgangatho.
Yenza 'iBuzz' kusasazo lwakho
Thetha kwaye unxibelelane nabaphulaphuli bakho.
Hlela kwakhona iividiyo zakho.
Ungaqatshelwa njani ukuba ukhule kwiTwitch?
Kufuneka uthathele ingqalelo oku kulandelayo:
Sebenzisa iinethiwekhi zakho zentlalo.
Iiphaneli zolwazi zabasebenzisi bakho ukufumana oko bakufunayo ...
Umfanekiso weprofayile, uluntu luyazi ukuba ungubani.
Isimbozo esinemibala eqaqambileyo kunye nemifanekiso.
Imidlalo enomxholo obalaseleyo wokusasaza.
Isimo sendawo yakho yokudlala.
Yazi indlela yokonwabisa.
Yenza uhlaziyo oluzenzekelayo lwe: ababhalisile, abanikeli kunye nabalandeli.
Bonisa izipho, iibhonasi kunye namabhaso kubasebenzisi.
Bona kwaye ulandele ezinye iindlela zeTwich.
Mema ababhalisile bakho kukhuphiswano kwaye udlale kwisitishi sakho.
Yenza imixholo yoqobo evelisa imfihlelo kunye nomdla wokufuna ukwazi.
1 Ungalonyusa njani ixesha lokujonga kwiTwitch?
2 Wazi njani ukuba ngubani okujongileyo kwiTwitch?
3 Unokuba notyelelo olungakumbi ukuze ukhule njani kwiTwitch?
4 Indlela yokukhulisa abantu kum Stream Twich?
5 Ungaqatshelwa njani ukuba ukhule kwiTwitch?
Uyenza njani iakhawunti ye-Facebook?